Lihlehlisiwe icala lesikole 'esingafuni' ukuthatha abafundi | News24
Lihlehlisiwe icala lesikole 'esingafuni' ukuthatha abafundi
Pretoria – Isicelo esiphuthumayo esifakwe enkantolo yisikole iHoërskool Overvaal eVereeniging, ngodaba lokuthi uMnyango wezeMfundo eGauteng ufuna ukufaka abafundi abangu-55, sihlehlisiwe.
Lesi sikole esifundisa ngesiBhunu, sikhala ngokuthi sigcwele ngakho ngeke sikwazi ukubathatha la bafundi okukhulunywa ngabo.
UMnyango wona ukuphikisile lokhu ngokuthi kunobufakazi bokuthi ziningi izikhala ezikhona kulesi sikole futhi singakwazi ukuthatha la bafundi, kodwa asifuna ukubathatha ngenxa yolimi abafuna ukufundisa ngalo.
Ibhodi elengamele lesi sikole yilona elifake incwadi efungelwe enkantolo ngoLwesibili ukuphendula izinsolo zoMnyango nokuyinto ephoqe ummeli wawo ukuba acele leli cala lihoxiswe izinsuku ezine ukuze bafundisise lezi zincwadi ezifakiwe.
OLUNYE UDABA:Inhlangano ithi isaphila intatheli yakuleli osekuphele unyaka ithunjiwe eSyria
IJaji uBill Prinsloo unikeze uMnyango izinsuku ezimbili, kodwa wakhipha isexwayiso sokuthi lesi sicelo siyaphuthuma futhi kumele kutholakale isixazululo ngokuphazima kweso.
"Isimo esifana nalesi lapho kumele kuphume khona isinqumo ngokushesha ukuze bonke abathintekayo bazi ukuthi bamephi, siyaphuthuma," kusho iJaji.
USteve Mabona okhulumela uMnyango uthi abaqondisisi ukuthi kungani lesi sikole singafuni ukuthatha la bafundi ngoba uMnyango wawushilo ukuba uzolekelela ngothisha kanye nezinsiza zokufunda.